Taariikhda Soomaaliya ee Geeska Afrika
Stichting Daryele (DA), The Hague, 2000
Wuxuu yidhi qoraagu:
Buuggani wuxuu ka hadlayaa taariikha Soomaaliya ee Casriga ah iyadoo loo qaabeeyay qaab manhaj. Wuxuu ka kooban yahay 5 cutub waxaana la socda tixraac iyo lifaaqyo xoojinaya xogta buugga iyadoo lagu lifaaqay dhammaan xilalkii ay ugu hoosayso wasiir raggii soo qabtay 1960-1991.
Buugga waxaa laga heli karaa: Dukaamo badan oo Soomaali ah ee UK laakiin si toos ah ayaa la iiga dalban karaa iyadoo la soo wacayo: Abdi(weli) Hassan +44-7931399065 ama 44-121 7534393. Qiimuhu waa $10 doolarka maraykanka ah.
Abdi Hassan Mohamed wuxuu ku takhasusay cilmiga Beeraha iyo Horumarinta Bulshada oo uu ilaa Masters degree ka gaaray. Wuxuu sidoo kale ka shaqeeyay shaqooyin ku saabsan Samafalka iyo Horumarinta isagoo wax ka aas-aasay ururo samafal Soomaaliyeed sida HIRDA (Himilo Relief and Development Association) oo saldhigiisu yahay Holland balse xaruntiisa Ingiriiska Hirda-uk uu isagu madax u ahay. Dhinaca kale shaqooyin kale oo dhinaca Bankiga ah ayuu ka shaqeeyay sida Banking Officer at Lloyds TSB bank UK, waxaan leeyahay hadda Agency Translation oo Freelance ah. Midda ugu muhiimsan waa inuu qoraalo badan oo maqaallo ah ku daabacay bogag Soomaali Internet iyo kuwa jaraa'idka Holland.
Akhriste - 2008-09-23 09:43:18
nin walaalkii looxiirow atnasooqooyso
Qoraaga - 2007-07-29 16:24:43
Abdi Hassan Mohamed - abdihass55@hotmail.com
Buuggan oo ka kooban shan cutub, wuxuu cutubka koowaad ka hadlayaa qaab-nololeedkii dhaqaale, bulsho iyo siyaasadeed ee Soomaaliya ka hor imaatinkii guumaystayaashii reer Yurub; Cutubka labaad wuxuu lafa gurayaa sidii guumaystayaashii reer Yurub iyo Itoobiya ay u qaybsadeen Soomaaliya, heshiisyadii difaac ee dhex maray beelaha Soomaaliyeed iyo dawladihii reer Yurub, dhaqdhaqaaqyadii gobonnimadoonka iyo midowgii iyo xoriyaddii Soomaaliya; Cutubka Saddexaad wuxuu ka hadlayaa waqtigii xoriyadda iyo dawladdii rayidka ahayd ee 1960-69, caqabadihii horyiil midowgii waqooyi iyo koonfur iyo kala duwanaantii qaab-dhaqan dhaqaale, qaab maamulkii iyo loolankii siyaasadeed ee jiray; Cutubka Afraad wuxuu ka hadlayaa Dawladdii Milateriga/Hantiwadaagga ee 1969-90, wejigii horumarka iyo wejigii dib udhaca iyo bilowgii burburka Soomaaliya; Cutubka Shanaad wuxuu ka hadlayaa xilligii dawlad la'aanta 1990-2000, hawshii Operation Restore Hope, wuxuu cutubku falanqaynayaa faragelintii ciidamada shisheeye iyo ujeedooyinkii Maraykanka ee faragalinta Soomaaliya iyo isbedelkii ay arrintani ku keentay mustaqbalka ururka qaramada midoobay, wuxuu kale oo cutubka ka hadlayaa shirarkii loo qabtay Soomaalida ee uu ugu dambeeyay shirkii Carta. Buuggan kala xariir: abdihass55@hotmail.com